CAYAYAANKA UGU MUHIIMSAN EE SOO DAGAY, SIDA LOO MAAREEYO - WARSHAD ORNAMENTAL KORAYA
Cudurada qaboobaha iyo muuqaalka cayayaanka on dhirta si weyn u saameeyaan guryaha guud ee ubaxyada, iyo mararka qaarkood waxay keeni kartaa dhimasho dhamaystiran ee geedka.
Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in la ogaado siyaabaha suurtagalka ah ee looga ilaalin karo qaboojinta ka soo cayayaanka.
Sida loola shaqeeyo lafil
Gawaarida badanaa waxay weeraraan duurka iyagoo sii kordhaya hooska. Waxay ku dhaadhacaan geedo qallafsan (badiyaa guga hore) oo u gudba burooyinkeeda, oo ku dhex jira ubaxa.
Way u fududahay siisay si ay u helaan tufaaxa laga bilaabo burka, cunta oo ay ka dhigaan ubaxyo ka hooseeya. Meeshii midabkeedu uu soo baxo, ugu dhakhsaha badan boqol caruur ah oo ubax ah ayaa la sameeyey, kuwaas oo la kulmay meel kasta oo dalka ka mid ah.
Way adag tahay in loola dagaallamo lafaha, sababtoo ah waa inaad si joogto ah u qaaddaa iyaga gacanta. Si kastaba ha noqotee, qaabkani ma awoodi doono in uu ku guuleysto guusha, sababtoo ah shakhsiyaadka cusubi waxay si dhakhso ah u qaadan doonaan meesha kuwa la soo ururiyey. Waa maxay siyaabaha kale ee looga hortagi karo cayayaanka?
Haddii aadan u jeedin caawimaadda noocyada kala duwan ee kiimikooyinka, kuwaas oo ku jira tirooyin ku filan suuqyada casriga ah, waxay sidoo kale kaa caawin kartaa burburinta xayawaanka. iniin khardal ah, inkasta oo daaweyntan oo kale ay waxyeeli doonto maahan oo kaliya, laakiin sidoo kale baadiyaha laftiisa laftiisa.
Ma taqaanaa? Waxay u baahan yihiin duurka Rosein lagu buufiyobudada lagu badhaxayee saamiga 100 g of mustard inay 10 litir oo biyo ah.
Mustard waa in laga buuxiyaa biyo diirran, taas oo ka caawin doonta xalka in si fiican loo nuugo. Dhirta la daweeyay waxaa loo oggol yahay inay ku degto laba illaa seddex saacadood, waxaa xitaa ka wanaagsan inay ka baxdo jimicsiga isku daridda maalin.
Waxaad si fudud ugu rusheeyaa garbaha korkeeda hareeraha - waa inay ka cabsiisaan rinjiga kor u dhaafaya cawska dhulka.
Hababka wax ka qabashada aphids cagaaran
Cayayaanka on qaboobaha nuugaan casiir ka soo caleemaha yar yar iyo caleemaha geedka, sababtoo ah waxa uu yahay deformed iyo dhogorta. Sidoo kale, iyagu ma quusto iyo burooyinkeeda.
Faashad Cagaaran - nooca aadka u weyn ee cayayaanka, gaar ahaan marka la barbardhigo kuwa kale. Cayayaankaasi waxay leeyihiin cagaar qurux badan (mararka qaarkood brown) iyo antennae madow oo dheer.
Waqtiga gu'ga, laga bilaabo ugxanta dheeraadka ah, dirxiga ayaa u muuqda, oo ugu dambeyntii u soo jeestaan ​​dumarka aan qaan-gaarin. Jiilalka xiga ayaa horayba u shaaciyey shakhsiyado kala duwan, iyagoo awood u leh inay u duulaan duurka deriska ah isla markaana waxay sameeyaan deegaanno cusub.
Ma taqaanaa? In ka badan toban jiil oo ka mid ah aphids cagaaran ayaa horumarin kara sanad ka badan.
Tirada noocan oo kale ah cayayaanka Rose ee bannaanka furan sida caadiga ah waxay kordhaan Juun, ka dib markii ay sameeyaan "shaqada wasakh ah" ilaa dhamaadka xagaaga. Xaaladaha intooda badan, aphid ayaa degaya dhamaadka caleemaha yar yar iyo burooyinkeeda, laakiin caleemaha ma aha wax aad u badan. Caleemaha waxyeelo ma furi karaan, caleemaha dhirta way qallalan yihiin.
Waa lagama maarmaan in la bilaabo daweynta cayayaanka ee cayayaanka kuwaas oo muuqaalka ka soo baxay dirxiga ugu horreeya, ku celinta koorsada daaweynta sida loo baahdo: 2-3 toddobaad ka hor inta la yiraahdo aphids gebi ahaanba way baaba'aysaa.
Ujeeddooyinkan, sida "Confidor", "Iskra-M", "Spark Double Effect", Bison, iyo Tanrek ayaa badanaa la isticmaalaa. Faa'iidada miisaaniyaddaani waa heerkooda sare ee hufnaanta (xataa cimilada kulul), habka nidaamka nidaamka ficil ahaan iyo si deg-deg ah ee unugyada dhirta. Maandooriyaha ma la dhaqo roob.
Waxaad ka saari kartaa aphids cagaaran iyo mishiinka, yaraynta caleemaha waxyeelada leh ama cayayaanka oo leh maro qoyan. Gobollada yaryar ee aphid waa la baabi'iyaa. isticmaalka saabuunta (maqaarka caadiga ah ee saabuunta caadiga ah lagu qasi karo 10 litir oo biyo ah karkaraya). Sida ugu dhakhsaha badan ee loo xaliyo si buuxda loo qaboojiyey, waxaa isla markiiba lagu dabaqaa baadiyaha dhaawacan.
Sawfly iyo cutter caleen
Sawfly - Hymenoptera waa cayayaan yaryar oo si buuxda u cuni kara caleemaha geedka, iyaga oo ka dhigaya kuwo hufan meelaha qaarkood.
Waxa kale oo ay ka soo baxaan asliga ah gudaha, taas oo ah sababta ay u sii socoto ilaa aad jebiso qaybta madow iyo daciif ah ee ubaxa..
In dagaalka ka dhanka ah cayayaan this, saaridda caleemo waxyeelo iyo daaweyntooda leh sunta cayayaanka gaarka ah, iyo sidoo kale moobeylka dhulka ka yar baadiyaha a rose, caawisaa si fiican.
Waa muhiim! Dirxiga cayayaanka ayaa laga yaabaa inuu ku sii socdo dhulka ilaa sanadka soo socda, Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in dhulka lagu daaweeyo habab gaar ah.
Qalabixi caleen - cayayaanka ah ee caarada ku wareegsan cidhifyada caleemaha dhufanayaska yar yar yar.
Tallaabooyinkani ma keenaan waxyeelo khaas ah, laakiin qaybinta nafaqooyinka iyada oo duurka ay ka sii darayso, muuqaalka guud ee ubaxa sii xumaanayo.
Sida qiyaas ka hortag ah, waxaad ku dari kartaa yamaaruggii, yamaariga iyo cawska kale ee adag ee beerta, ee cawska kaas oo cutters caleen ay diyaariyaan gurigooda. Ka takhalus cayayaanka ayaa kaa caawin doona xalinta saabuunta. Intaa waxaa dheer, waxaa suurtogal ah in aad ka ilaaliso-aadanku saameynta cutubka caleen adoo tuuraya shabaq ilaaliya duurka.
Ma taqaanaa? Microflora Pathogenic of shub wuxuu leeyahay ilaa 270 nooc.
Noocyada lamid ah on qabsoomin, iyo sida loo tirtiro iyaga
Noocyada ugu halista ah ee kuwa lamid ah, kuwaas oo inta badan laga helaa duurka Rose, waa weevil iyo bronzovka.
Weevil (lowska caleen) - Tani waa duqsiyo badan oo ballaaran (illaa 1 cm), taas oo nibbles cidhifyada caleemaha. Wuxuu leeyahay midab madow iyo midab leh mana awoodi karo inuu duulo.
Hab nololeedka ugu firfircoon wuxuu u horseedaa habeenkii, iyo inta lagu jiro maalintaas wuxuu ku dhuuban yahay muraayadaha carrada. Thanks to habkan, waxaad xitaa iska indha tiri karaa kuwa lamid ah, ogaadaan caleemo burburay oo keliya.
Ma aha oo kaliya dadka waaweyn ee weevil halis u ah dhufanayasin, laakiin sidoo kale ay dirxiga, kuwaas oo ay ku kala duwan yihiin ay size aad u cajiib ah iyo midab iftiin ah. Waxay ku nool yihiin oo kaliya dhulka iyo ku quudiyaan xididada dhirta.
Haddii tiro badan oo cayayaanka noocan oo kale ah ay ka bilaabaan goobahaaga, waxaa laga yaabaa in dhufaysku u dhintaan, sababtoo ah dhaawaca daran ee caleemaha, aagga faa'iidada leh waa la yareeyaa, warshaduna waxay bilaabmaysaa inay ka baxdo.
Waa muhiim! Xaaladaha badankood, kuwan soo arag xayawaanku waxay ku dhici karaan ubaxakuwaas oo ku kora dhirta geed ama geedo qaro weyn, halkaasoo laga saaro wareegga hawada. Intaa waxaa dheer, duqsiyo waxay ahaan doontaa waxaa jira qaboobo on dhirta, wiiqay wakhtigii iyo mashaariicda beeraha oo liita.
Si aad ula qabsato cayayaankaas adigoo ku buufinaya duurka qorrax dhaca, adigoo dooranaya mid ka mid ah cayayaanka ugu caansan maanta. Waxaad sidoo kale isku dayi kartaa in aad soo ururiso lamaanaha muuqda gacanta, laakiin tani waxay u baahan tahay iftiin (waxay soo baxaan kaliya habeenkii).
Doorashada ugu dambeysa waa shaqo badan waxayna u baahan tahay xirfad fiican, laakiin haddii aadan rabin inaad doorato, waxa fiican in dhufaysyada sunta ah ee cayayaanka (ma aha mid guga ama xilliga dayrta), markaa tani waxay noqon doontaa xal wanaagsan oo ku meel gaar ah dhibaatada.
Thrips on qaboobaha
Cimilada kulul iyo qallalanba waad arki kartaa on dhabarka caleemaha of hambalyo ah waa patina brownish brownish ah oo bixiya hooska a silvery. Tani waxay ka dhigan tahay in dhirtaada la qaaday tuura. Caleemaha ay waxyeeleeyeen iyaga si dhaqso ah ayay u soo noqdaan bunni iyo hoos u dhacaan, iyo burooyinkeeda cirridka ah ee deformo oo ay ku daboolaan dhibco.
Intaa waxaa dheer, dheecaanka madow ee madow ee cayayaankaasi ka baxsan yahay waa jawi weyn oo loogu talagalay horumarinta fangaska madow. Markaad la macaamilaysid, baadiyaha dhaawacan waxaa laguula dhaqmaa sunta cayayaanka, kuwaas oo gebi ahaanba halis u ah cayayaanka faa'iido leh.
Walnut iyo xayawaan
Nutcracker - cayayaanka kale ee khatarta ah ee kuyarrada, helitaanka dhererka 2-3mm. Waxay leedahay madow madow, oo laga soocay labada dhinac, iyo caloosha dabacsan. Haddii aad eegto gudaha mid ka mid ah maqaarka (waa naas-dheriga kuwaas oo foomka), ka dibna hubaal waxaad ka heli doontaa boogta cayayaanka halkaas.
Bloomiyada noocan oo kale ah ayaa la geyn karaa caleemaha, ubaxa iyo caleemaha, inta badan waxay gaaraan 5 cm. Xaaladaha qaarkood, tani waxay keenaysaa dhimashada geedka.
Waxaad ka badbaadin kartaa xayawaankaaga sida kaaga yimaada dhibaatadaas oo leh caawinaad ka mid ah cayayaanka la midka ah ee loo isticmaalo dagaalka ka dhanka ah cayayaanka kale, laba jeer rusheeyaa dhirta.
Natiijo wanaagsan ayaa laga helayaa isticmaalka daroogada "Lightning" (2 ml oo ah badeecada waxaa lagu qasi karaa 10 litir oo biyo ah).
Waa muhiim! Marka la barbardhigo farsamooyinka kiimikada, waxaa fiican in la sii wado halganka iyo farsamada, taas oo ah, in la gooyo oo la gubo koritaanka muuqda.
Meelaha - cayayaan ku nool dhulka oo quudiya habeenkii oo keliya. Sidaa daraadeed, inta badan waxaad arki kartaa raadadka kaliya ee hawshiisa.
Haddii ay jiraan waxyaabo badan oo waxyeello ah, markaa waxa fiican inaad si dhakhso ah u isticmaashid daawooyinka cayayaanka (cayayaanka isku midka ah waxay sameyn doonaan sida looga hortago aphids). Iyadoo ay ku xiran tahay xoogga dhaawaca, gooyuhu wuxuu siin karaa ubax dheeli tiran, taas oo macnaheedu yahay in ay ka wanaagsan tahay inuusan ka tagin geedka.
Caarada caarada caleemaha
Ka mid ah cayayaanka in ay yihiin cayayaanka of hambalyo, waa in la muujiyo caarada caarada. Dhammaan cayayaanka jira ee cayayaanku, caarada caarada ayaa ah midka ugu caansan waxayna noqotaa sababta daciifinta dhirta. Dhibaatada kacdoonka duurka waxay si deg deg ah uga lumaan caleemaha, waxayna u nugul yihiin cudurro kala duwan.
Cayayaankaasi waa cayayaanka yar yar (aan ka badnayn 2 mm), taas oo ah sababta ay aad ugu adag tahay in la ogaado. Caarada caaradu waxay sameysmaysaa deegaannada oo dhan, tiradaasi waxay noqon kartaa in ka badan 100 qof.
Qadar yar oo caarada caarada ah, waa inaadan walwal gelin, laakiin waa inaad marwalba tixgelisaa xaqiiqda ah in cayayaankani uu si dhaqso ah u badiyo, taas oo horseedi doonta cawaaqib xumo dhirta.
Quudinta juuska caleenta, gaar ahaan marka uu dhirta ku jiro marxaladda koritaanka firfircoon, cayayaanka waxay caawisaa in ay wiiqdo geedka, waana in ay magdhawdo khasaaraha sababay nidaamka asaasiga ah. Geedo dhalinyaro ah ayaa si gaar ah u saameeya daal.
Waa muhiim! Waxaa suurtagal ah in la ogaado cayayaanku dhinaca dhinaca gudaha ee caleemaha korka, halkaas oo ah shabakad aad u weyn oo la sameeyay, taas oo cayayaanka yaryar u ordaan.
Haddii aad rabto inaad ka takhaluso caarada caarada muddo dheer, markaa waxaad u baahan tahay inaad la dagaalanto marxaladaha wareegga nolosha.
Xagaaga oo dhan waxaad u baahan tahay inaad geedaha ku dhejisato xeryahooda kiimikada gaarka ah, iyo xilliga dayrta, marka qabowgu yimaado iyo cayayaanka u dhaqaaqa caleemaha dhacay, waxaad u baahan tahay inaad nadiifiso nadiifin oo aad ku gubto caleemaha dhacday. Sidaa darteed, kaliya maaha inaad ka takhalusto cayayaanka, laakiin sidoo kale burburin ee dhirta cudurada fangas badan.
Rosa Cicadas - mid ka mid ah cayayaanka ugu yar ee cayayaanka (dhererka jidhka ee qof wayn oo gaaro 3-4 mm oo kaliya). Waxay leedahay labo labo baalood iyo lugaha dheer ee lugaha. Cayayaanka waxay ciribtirmaan caleemaha dhirta, cunista hilibka iyaga oo saaraya dirxiga ee afkoda dhufanayada. Caleemaha ubaxyada si dhakhso ah ayey u noqdaan huruud iyo dhacaan.
Doorashada, marka loo eego roodhida soo kabashadan cayayaankan, waxa fiican in la siiyo doorashooyinka cayayaanka caadiga ah (tusaale ahaan, "Aktar"), inkastoo ay noqon doonto mid ugu saxsan in la qaado tallaabooyin ka hortag ah xilliga dayrta dayrta.
Maxaa keena muuqaalka cayayaanka on rose
Marka lagu daro weerarrada cayayaanka waxyeellooba, soo-galoyin badanaa waxa ay ku dhacaan yaraanta nafaqada yar ee carrada. Tani waa saameyn aad u xun oo ku saabsan horumarka iyo ubaxyada dhirta. Sidaa darteed, si ay duurka u kacaan si ay u koraan caafimaad leh oo ku farxaan, waa in ay ku yaalliin meel qorrax leh, halkaas oo jiri doona wareegga hawada joogto ah.
Waa muhiim! Dalladaha macdanta ah ee caadiga ah iyo dareeraha ayaa si weyn u hagaajiya xaaladda carrada waxayna leedahay saameyn togan oo ku saabsan horumarinta shaxda. Cunto dheellitiran ee nafaqooyinka carrada ayaa sidoo kale waxyeello leh.
Marka aad dooranayso goob lagu beerayo, waxaa lagama maarmaan ah in laga fogaado meelaha qoyan iyo kuwa hoosta leh (tusaale, geedo waaweyn), inkasta oo astaan ​​muhiim ah ay tahay tayada shaqeynta goobta la doortay.
Dillaaca cudurada Rose waxay u muuqdaan maalmo xaga qoyan, sida deegaan qoyan iyo mid diirran waa xaalado heer sare ah oo loogu talagalay horumarinta dhammaan noocyada cudurada. Waxaa lagama maarmaan ah in la fahmo in xaaladaha noocan oo kale ah la abuuray xitaa leh dhumuc xoog leh ee duurka, marka caleemaha qallajin karin waqti dheer ka dib roobka ama waraabinta. Xaaladaha noocaas ah, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo khafiifinta waqtigeeda.
Dagaalka ka dhanka ah cudurrada waa inay bilaabaan muuqaalkooda koowaad, sababtoo ah haddii aad maqan tahay xilligan, dhirta daciifsan ayaa si deg-deg ah u baabi'inaysa ubaxyada oo aan si fudud u noolaan karin jiilaalka.
Ie, markaad aragto Gooryaanka, xayawaanka, xayawaanka ama cayayaanka kale ee ku jira shubankaaga, hadda waxaad taqaanaa waxa la sameeyo: waxa ugu muhiimsan waa in la xalliyo geedkii burburay wakhtigii loogu talagalay oo looga hortagi lahaa dhibaatada faafitaanka.